Xiaomi Redmi Y2 mutengo unotanga paRs 9,999 uye inowanikwa chete paAmazon, Mi.com, Mi Home uye yakatenderwa Mi Partner zvitoro muIndia.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi's Redmi Y2 yakagadzira kutanga kwayo mwedzi wapfuura muIndia uye kunyangwe ichinyatso kuratidza yaive yayo selfie kamera, foni yakagadziridzwa mumativi akasiyana pamusoro peyaimbotangira Redmi Y1.
Iyo ine zvinhu zvakati wandei kuratidza-kubva inosanganisira yazvino kuratidza standard, Android Oreo-based MIUI software uye hwakagadziridzwa hupenyu hwebheti. Foni inouyawo nenguva-yakaedzwa Qualcomm Snapdragon 625 octa-core processor mudumbu rayo.
Redmi Y2 inorarama zvinoenderana nematanho akagadzwa naRedmi Y1 kana iri imwe bhajeti Xiaomi foni? Ngatizviongororei.
Ratidza uye dhizaini:
Xiaomi Redmi Y2 inozvirumbidza yeiyo yakakura 5.99-inch HD + skrini ine 18: 9 factor ratio taira-yakagadzirirwa dhizaini yemafaro. Ndakanga ndine nguva yakanaka yekuona yakakwira-resolution TV nhepfenyuro paAmerican Prime Vhidhiyo yekushambadzira app uye kuverenga kwemavara zvakare kwakanaka, kunyangwe kunze.
Nekudaro, nekuda kweiyo huru screen, vamwe vanhu vane maoko madiki vanoomerwa nekushanda pairi neruoko. Asi, nekuda kweMIUI, pane sarudzo yekudzikisa iyo skrini yekushanda kune saizi inogoneka kuti ifambe kuburikidza nefoni ine zvinhu zvidiki.
Unogona kuzviita nekuenda kuZvirongwa >> Zvimwe Zvirongwa >> Imwe-ruoko nzira >> sarudza saizi saizi (4.5-inch kana 4.0-inch kana 3.5-inch). Kana izvo zvangoitwa, iwe uchangoshambira kurudyi kana kuruboshwe kubva kumba bhatani kuti udzikise saizi reizi.
Padivi rekumashure, inoratidzika nemeso-inofadza yemapatani emtsetse kumusoro uye pasi. Kuiswa kwechigunwe chemunwe wepakati mukati zvakare kunokosha sezvo ichiwanikwa kune vashandisi vane maoko madiki.
Xiaomi akaita yakanaka pendi basa kumusana. Iyo sirivheri-hued yekuongorora yuniti iyo yatakatambira haina kuwana zvigunwe zveminwe painobatwa muruoko. Ichi chaicho chakakura kukosha kuwedzera asi zvinogona kucherechedzwa kuti goko hombodo rakafukidzwa ne polycarbonate zvinhu. Tataura izvozvo, yakasimba zvakakwana kuti isimbise kudonha netsaona sezvazvinouya neyakareruka goko-chifukidziro. Ziva chokwadi, mutumbi weRedmi Y2 wakachengetedzwa-zvakanaka uye icho chinhu chidiki chisinganetseke nezve foni.
Xiaomi Redmi Y2 inouya nehombodo yakasimba kumusanaKVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 inouya nematauri maviri-akakwenenzverwa pachigadziko chine Type 2 microUSB port padyo.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 inoratidzira IT blaster uye mic kurudyi uye 3.5mm audio jack port kurudyi.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 inouya neVolombo rockers uye iro bhatani remagetsi kuruboshwe rwemupendero.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 inouya neSIM -tray slot kurudyi. Zvinogona kucherechedzwa kuti iyo SIM-tray inouya nematatu matatu- SIM-1 SIM-2 microSD kadhi slotKVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 inouya nekaviri-kamera kumusana ine chigunwe chakadhindwa sensor munzvimbo iri kure yeiyo shell.KVN Rohit / IBTimes India
Handifunge kuti chero kambani yakashandisa Qualcomm Snapdragon 625 mumafoni akawanda saXiaomi muindastiri. Iyo yakashandiswa simba muRedmi Cherechedzo 5, Redmi Cherechedzo 4 (yepasi rose), Xiaomi Mi A1, Mi Max 2 uye Redmi 6 Pro pakati pezvimwe zvigadzirwa zvine akasiyana monikers muChina. Asi, ndinofanira kutaura, ino nguva-yakaedzwa Snapdragon 625 yakaratidza mettle yayo kare uye inoenderera ichidaro muRedmi Y2 yazvino.
Munguva yemiedzo, ini handina kutarisana nenyaya chero panguva yekupindura app, ndichichinja pakati pehuwandu hwenhare, kurodha kamera programu uye kunyangwe ndichitamba mutambo parunhare. Inonyatsobatsirwa ne3GB / 4GB RAM uye software yeAndrew 8.1 Oreo-based MIUI 9.5.
Xiaomi Redmi Y3 inouya neyakanaka kamera michina yemutengo wayo.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y1 yakaisa benchmark ye selfie foni mune yepakati-chikamu chikamu uye mutsivi wayo haafadzi zvakare. Iyo inozvirumbidza yeyemhando-yakapfuma 16 MP yekumberi kamera ine Artificial Intelligence (AI) -inogadziriswa Beautify 4.0. Kana iyo Auto HDR yagoneswa, iyo 16MP yekumberi kamera inogona kungoona mamiriro ekudzoserwa-kumashure kuti ishandise HDR mugumisiro.
Muhupenyu chaihwo, yakaitawo zvakanaka mumamiriro akadzika-mwenje. Nezve iyo AI Bokeh ine chekuita nayo, yakandifadza nehuwandu hwechisikirwo ruzivo rwevanhu uye nebvudzi rakachengetwa mufoto.
Kumusana, iyo Redmi Y2 inouya ne 12 MP + 5 MP AI kamera mbiri. Iyo 12 MP yekutanga sensor ine 1.25µm hombe pixels uye 5 MP sekondari sensor yakatsaurirwa kuti iwane ruzivo rwakadzika, inogadzira mafoto ane makuru eBokeh mhedzisiro. MuParrait Mode, zvese zviri pamberi uye kumashure makamera anotsigira AI Beautify.
Tarisa uone mifananidzo yemuenzaniso weXiaomi Redmi Y2 kamera:
Xiaomi Redmi Y2 yepakutanga kamera sampuli yakatorwa manheru.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 yekutanga kamera sampuli yakatorwa mangwanani.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 yepakutanga samples kamera yakatorwa mumasikatiKVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 yepakutanga kamera sampuli yakatorwa munguva yemanheru.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 yepakutanga kamera sampuli yakatorwa nePortrait mode manheru.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 yepakutanga kamera sampuli yakatorwa masikati.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 yepakutanga kamera sampuli yakatorwa muhusiku nemwenje wechiedza pane.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 yepakutanga kamera sampuli yakatorwa muusiku.KVN Rohit / IBTimes India
Xiaomi Redmi Y2 inouya ne3,080mAh cell, ingangoita 25% pasi peiyo Redmi Cherechedzo 5 akateedzana. Kunyangwe isiri yekuita breaker, chishandiso chakandishandira zvakanaka kwezuva rese pasi pekugara uchishandisa. Ini ndinofanira kutaura kuti iyi yakasarudzika ndeyekuzviisa pasi, sezvo varidzi vemidziyo vakasiyana vane nzira yavo yekushandisa foni. Redmi Y2 ichagara nyore zuva rese kune vanhu vane tsika yekushandisa nhare yekufona nekutumira mameseji uye kubhurawuza internet.
Tichifunga nezve chokwadi chekuti Redmi Y2 iri selfie foni, vashandisi vanogona kutora snapshots uye voigovana pamapenhau ezvenhau pasina kunetseka nezve dhiriini kudhiraivha. Pasinei nekushandiswa kwepaintaneti, foni ichafamba zvakanaka uye kwenguva yakareba, nekuda kweyakagadzirwa software MIUI.
Kana iwe uri mushandisi inoyerera mavhidhiyo pane multimedia zvemukati application, kunyangwe 4,000mAh kana 5,000mAh bhatiri haigare kweanopfuura maawa masere.
Pakazara, Redmi Y2's 3,080mAh bhatiri inovimbisa ye-yakazara-zuva bhatiri riri pasi pekushandisa nguva dzose, iyo inosanganisira mashoma mashejisheni ezwi nevhidhiyo kufona, mameseji paWhatsApp, mutambo wemitambo kwemaminetsi mashoma nehafu yewebhu kubhurawuza pakati peimwe zuva-ku- zviitiko zvezuva pafoni.
Asi, kana iwe uchienda pamusoro pekukomberedza kutarisa mavhidhiyo nekutenderera kuburikidza nefoni data, ive shuwa kutakura bhangi remagetsi.
Xiaomi haingarondedzerewi semakwikwi akasarudzika mune yepakati-dhizaina chikamu chechikadzi muIndia. Chimwe chezvikonzero chikuru ndechekuti zvigadzirwa zvavo zvese zvave kukwanisa kuisa bhenji rekupa yakawedzera kukosha remari zvichienzaniswa nemakwikwi emakwikwi. Mune ino kesi, iyo Redmi Y2 yakakwanisa kundifadza ine hunyanzvi hwayo kunyanya kamera kamera.
Iyo Redmi Y2 yakanyatsogadziriswa neMIUI kupa mufananidzo wemufananidzo uine blur athari kunyange ine imwechete kamera yekumberi. Ndinofanira kutaura kuti zvakapfuura kurarama maererano nezvandinotarisira pafoni yemari pasi peRs 10,000. Iyo yekuvaka mhando, kunyangwe iyo polycarbonate yekuvaka muviri, inorumbidzwa uye ini handina kutarisana nechero performance performance maererano ne lag ndichifamba pakati pehuwandu hwemaapps kana kuvhura chero app yeiyo nyaya.
Pakazere, ruzivo rwemushandisi neRedmi Y2 rwave ruri kugutsa. Kana iwe uri kutsvaga yehupfumi selfie-kamera foni, unogona kuenda kune iyi Xiaomi foni.
Wakanakisa selfie Bhowa uye kumashure-padivi maviri-makamera ari akanaka
Yakasimba inovaka mhando uye inouya nechero chifukidziro chemahara chemutengo nemapakeji
Bhatiri rinogara kwezuva
Feature-rich MIUI software (ichi chikamu ndechekuzviisa pasi, asi vanhu vazhinji vanoda iyo MIUI's interface uye neakarongeka ekugadzirisa ayo aanopa)
Iyo auto-inotarisa ye back camera inononoka kudzikira apo mifananidzo inotorwa mumhepo yakadzika mamiriro. Asi, kana chinyorwa chakaita seruva, chisingazungunuke, zvinotora pfumo rakanaka.
Iko hakuna zvachose chimwe chinhu chekunyunyuta nezvefoni iyi. Vazhinji Xiaomi mafeni angabvuma kuti kambani yakanonoka kuunza iyo MIUI 10. Izvi hazvisi zvekupwanya, sezvo Xiaomi software rutsigiro inosvika kusvika makore mana mushure mekugadziriswa kwechigadzirwa. Rangarira Google inopa makore matatu chete ekutsigira kwePixel nhare dzefoni.